Cristiano Ronaldo Oo Rikoodh Muhiim Ee Taariikhi Ah Ka Sameeyay Kulanka Bayern Munich Ee Tartanka Champions League – Gool FM
(Real Madrid) 01 May 2018. Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ku biiray liiska halyeeyada kooxda cad cadka ah ee horey ugu soo ciyaaray kulamada 100-da ah ee tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Cristiano Ronaldo aya wuxuu qeyb kasoo noqday liis ay ka buuxaan xidigaha kooxda Real Madrid Iker Casillas oo horey u soo saftay 150 ee UCL ah, Raul Gonzalez 130 kulan ah Sergio Ramos 113, Roberto Carlos 103, halka Cristiano Ronaldo uu liiskan kaga jiro kaalinta 5-aad wuxuuna kulankan u noqonayaa kiisii 100 ee kooxda Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa ciyaaray kulankii lugta hore ay kula soo ciyaareen Bayern Munich kiisii 151 ee xirfadiisa kubada cagta tartanka Champions League. Waana rikoodh la mid ah halyayga kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez.
Laakiin Ronaldo ayaa kulanka haatan ka soconaya Santiago Bernabeu ee lugta labaad ku dhaafay Xavi Hernandez wuxuuna gaaray kulankiisii 152-aad, waana rikoodh aysan jirin xidig ka gaara taariikhda tartanka Champions League.
Real Madrid ayaana ciyaarta haatan ka socota garoonka Santiago Bernabeu ee lugta labaad wareega afar dgamaadka tartanka Champions League ee Bayern Munich waxay mareysaa 2-2.
Real Madrid oo Gaartay Finaalkii Seddaxaad oo Xariir ah kadib Barbarihii kulanka Bayern Munich ee Afar dhamaadka Champions League+SAWIRRO